Sevastopol, goobta of guulaheedii Ruush, eager to 'go home' - Rule News
Sevastopol, goobta of guulaheedii Ruush, dooneysa inay 'gurigaaga tag’
The calanka Yukreeniyaan marna runtii la duubay ee Sevastopol oo ay dekedda ka socdeen, guriga si Russia ee Black Sea raxan tan iyo wakhtigii tsars ah.
Oo Moscow cements ay gacanta ku hayaan in ka badan Crimea, dadka deegaanka ayaa sheegaya in ay weerarka ayaa raadineysa inay maalinta calanka Ruush, hore u waasac, duuli doonaa sida caadiga ah ee rasmiga ah.
In magaaladan reer 350,000 — halkaas oo god iyo jidadka qaadaan magacyada geesiyaal of War Crimean ama Midowga Soofiyeeti — madaxbanaanida Ukraine ee 1991 ahaa argagaxa leh.
Sidaas daraaddeed markii taliskii pro-Kremlin ee Viktor Yanukovych lagu afgembiyey bishii la soo dhaafay, tobanaan kun oo loola cararay jidadka, macneeyay in square dhexe oo ku naadinaysa ah ganacsade pro-Moscow, Alexei Chaly, Maayarka cusub ee magaalada.
“The muwaadiniinta Sevastopol go'aansadeen in ay ka gooyay oo dhan ay xiriir la tuugadaas, dambiilayaasha iyo naasiga kuwa qabsaday awooda in Kiev,” Ivan Komelov, Lataliyaha ah in Chaly, u sheegay AFP.
“mid ka mid No shaki natiijada” of March ee 16 afti in Crimea on qayb ka noqdo of Russia, ayuu yiri.
“Inta lagu guda jiro 23 sano ee xornimada, Ukraine ayaa waxba samayn noo. Kiev ka qaaday lacagtii iyo in ay. Marka dadka Sevastopol ayaa ay dhahdaa waxaan rajaynaynaa in Hooyo Russia jawaabi doonaa call noo qaado galay gashatay.”
Chaly, kaasoo sameeyey uu maal warshadaha ee korontada, waxaa laga yaqaan Sevastopol isagoo maal-dhiska ee taxadiri in xusuustiisa geesiyaal Ruush.
iyaga ka mid ah waa Vladimir Kornilov, Admiral Ruush ah ka socdeen oo ku hogaamiyay difaaca ee Sevastopol ka dhanka ah ciidan Franco-British-urub intii lagu jiray go'doominta 349-maalin ee magaalada in 1854-55.
erayada caanka ah ee la soo dhaafay Kornilov ee inta lagu guda jiro hareeraynta — “ISDIFAACA Sevastopol!” — ayaa XIDGTA oo marxalad Isbuucaan sida dadka magaalada deggan Loo kulmiyey kulan pro-Russia.
dhawaaqayay “Russia! Russia!” dadkii badnaa ayaa daawaday qaab Nadezhda Babkina gabyeen oo cayaartay in a dharka multi-midab, iwada daabac leh oo ku xirtaan dhaqanka.
dadkii badnaa ka mid ahaa 47-sano jir ah Pavel Filipov, xiran anorak cas oo ku calaamadsan “Kooxda Qaranka Ruush” in English.
– 'Like xubin diiday’ –
“Waxaan la sugayay joogo muddo tobannaan sano,” ayuu yiri. “Waxaan guriga ka socda, codadkii halkaan joogi doonaa 100 boqolkiiba Russia.”
Xaaskiisa Olga, 46, Ugu Yeeray xilligii Soviet markii magaalada iyo agagaarkeeda ahaayeen goobaha military qarsoon xiran ajnabiga.
“Waxaan lahaa nabadda iyo ammaanka, waxaan ka tagay furayaasha oo aannu u talinno derin ah, carruurta ka baxsan ciyaaray. Waxa uu ahaa wanaagsan,” ayay tidhi.
Socdaalka magaalada, waxaa jiri kara shaki yar ee doorka muhim Sevastopol ayaa ciyaaray taariikhda Ruushka.
19497	1 Crimea, Crimean War, Moscow, Red Army, Russia, Sevastopol, Soviet Union, Ukraine
← Apple Mac OS X 10.9.3 inuu ciyaaro 'isha’ hab loogu talagalay 4K bandhigay aasaasaha Web ku baaqay in biilka Internet xuquuqda →